Wasiir Odawaa “Todobaadka soo socda ayuu furmayaa shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe” – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa sheegay in shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe uu furmi doono todobaadka soo socda.
Wasiir Odawaa oo wariyeyaasha kula hadlayay Jowhar ayaa sheegay inay dib ka soo sheegayaan waqtiga uu furmayo, waxaana uu soo dhoweeyay sida loogu diyaar garoobay shirka.
“Shirka todobaadka soo socda ayuu Jowhar ka furmayaa, maalinta dib ayaa ka soo sheegeynaa, magaalada waxaa imaanaya ergooyinka labada gobol, madax soomaaliyeed oo furitaanka shirka ka qeyb galaya”ayuu yiri Wasiir Odawaa.
Wasiirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in labada Gobol ay si deg deg ah u doortaan Madaxweyne, si bisha 20-ka Bisha Febraayo shirka ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga uga mid noqdo Madaxda ka qeyb galeysa shirkaas.
Sidoo kale waxaa uu xusay in labada gobol ay yihiin kuwa ka dhiman dhismaha maamulada federaalka, isagoo ku baaqay odayaasha, waxgaradka iyo bulshada labada gobol in aan la kala tagin, oo mar walba la is qanciyo.
Wararka ayaa sheegaya in todobaadka soo socda uu shirka furi doono Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh, iyadoo bilowga shirka oo ah mid furitaan ah, kadibna loo guda geli doono howlaha maamul u sameynta labada gobol, sida qeybsiga ergooyinka ka qeyb galaya shirka, xulista xildhibaanada baarlamaanka, doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo tan Madaxweynaha.
Si kastaba ha ahaatee diyaar garow ballaaran oo loogu diyaar garoobayo shirka maamul u sameynta ayaa maalmihii la soo dhaafay ka socotay magaalada Jowhar.
C/kariin guuleed oo cadeeyay in Ahlu Sunna ay tahay garab muhiim oo ka maqan